Ny dikan'ny anarana Anton. Tsiambaratelo ny anarana Anton
Ny toetra tena manan-danja amin'ny lehilahy iray antsoina hoe Anton - fanekena, fikirizana ary tanjona. Olona saro-pantarina, tsara fanahy ary misokatra izy.
Ny anaran'i Anton dia nadika avy amin'ny teny latinina ho "lehibe."
Ny niandohan'ny anarana Anton:
Araka ny voalazan'ny voalohany, ny anarana Anton dia avy amin'ny latinina "Anthony" - "malalaka."
Araka ny dikan-teny hafa, ny anarana dia avy amin'ny teny Grika fahiny - "mifaninana", "miara-miady", "fahavalo".
Ny toetra sy ny fandikana ny anarana Anton:
Amin'ny maha-zaza azy, Antoshka kely dia firaiketam-po, feno fahasambarana izy, izay, na izany aza, dia mitohy hatramin'ny adoloka. Tena mahafinaritra amin'ny ray, na dia misara-panambadiana aza ny ray aman-dreny. Tena manaja ny ray aman-dreniny izy. Tena miasa mafy sy miasa. Tia mamaky be. Amin'ny alalan'ny fiainana, vintana ary vintana. Rehefa nandeha ny fotoana, lasa lehilahy maromaro ny faharetana. Matetika izy ireo no mila torimaso tsara sy rivotra madio. Mahatsiaro tena tsara izy ireo ary manaparitaka ny faharanitan-tsaina.
Ireo Antoniana dia tena sahy sy maharitra, diplomatika ary manisa-bola, manana toetra ara-panahy feno fitiavana izy ireo, na izany aza, misy ihany koa ireo karazam-pitabatabana amin'ny toetrany, izay tsy inona fa ny tsy fahampiana tokana izay ezahan'izy ireo hafenina tsara amin'ny hafa. Tena mirehareha ny Antoniana, manana fieboeboana be dia be izy ireo. Tsy mora ny miaraka aminy, tiany ny manana namana tokana, fa tsy ny orinasa goavana, tarihan'ny fitsipika - "Tsara kokoa ny namana iray raha oharina amin'ireo roa vaovao".
Anton, matetika, tia ny psikology, ny parapsychology, ny filôzôfia, ny fanafody, ny mpitsabo. Anaram-boninahitra malaza, mpihira, mpanakanto, mpanoratra izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy iray amin'ireo olona izay manana drafitra ny fandresena izao tontolo izao, indraindray tsy fantany izay tiany hatao amin'ny fiainana, dia tsy afaka maneho ny faniriany foana. Amin'ny temperament, Anton dia mibaribary, matetika "miala" amin'ny tenany, ka manidy ny tenany hiala amin'ny olona rehetra manodidina azy, anisan'izany ny havana.
Avy amin'ny Antonov, mpahay siansa mahafinaritra no nahazo, dia tena ilaina amin'ny famokarana izy ireo, tena tezaina amin'ny teknolojia. Izy ireo dia sarobidy avy amin'ny mpiara-miasa sy ny fitantanana noho ny fahaiza-manao goavana ho an'ny asa sy ny fahazotoana.
Ao amin'ny fiainany manokana, Anton dia miezaka amin'ny fitiavana tsy manam-pitiavana, manorisory ny malalany amin'ny antso an-telefaona sy ny famoahana ny fihetseham-pony, kanefa, miaraka koa, mety manana mpiara-miasa maromaro eo anilany. Indraindray dia mijanona ho bachelors ny fiainana ny Antoniana. Tena mahery vaika izy ireo. Matetika no manaraka ny fitsipiky ny fitondran-tena.
Satria ny ankamaroan'ny tanora ao Anton dia manodidina ny vehivavy sy ny ankizivavy maro, saingy sarotra be ny manambady azy. Amin'ity dingana ity dia manapa-kevitra izy mandritra ny fotoana lava, mandinika amim-pitandremana amin'ny antsipiriany rehetra sy izay rehetra nodinihina teo aloha. Ny fanapahan-kevitra dia mitaky manokana ny azy manokana. Na izany aza, taorian'ny fanambadiana, nanohy ny diany "mankany ankavia" izy. Ny hatsaram-panahiny sy ny fahatsarany dia manampy azy hisoroka toe-javatra maro ao anatin'ny fianakaviana sy ny tantara ratsy. Matetika izy no manonofy ny tranony - trano mimanda izay ahafahanao manafina ny manodidina, fa tsy rariny, araka ny hevitr'izy ireo, ny fandriampahalemana.
Zavatra mahaliana momba ny anarana Anton:
Ny anarana Anton dia iray amin'ireo epithetan'ny andriamanitra grika mitondra fanasam-be ary mahafinaritra - Dionysus.
Ankehitriny, io anarana io dia tsy malaza loatra, na dia taona maromaro lasa izay aza no iray amin'ireo mahazatra indrindra.
Anton anarana amin'ny fiteny samihafa:
Anton's name in English: Antony, Antony (Antony)
Anarana amin'ny teny sinoa: 安 东 (Andun)
Anarana amin'ny teny japoney: ア ン ト ン (Anton)
Anarana amin'ny teny frantsay: Antonius (Antonis)
Anarana amin'ny teny poloney: Antoniusz (Antonush)
Endriky ny matoanteny amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Tosha; Antos; Anton; Anton; Tosya; Antya; Tonya; antonym
Anton - ny lokon'ilay anarana : mavo
Voninkazo Anton : lily
Vato Anton : garnet
Ny fampitahorana amin'ny teny estonianina dia nampitandrina ny antony tsy haha-sarotra ny maka sary ny olona matory
Ambasadin'i San Marino ao Okraina
Iza ny anaran'i Gregory?
Inona no atao hoe Timur?
Shingles - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Ny tratra dia maratra aorian'ny ovulation
Antika fanaka miaraka amin'ny tanany
Zana-koditra - ny antony
Ahitra amin'ny atiny ho an'ny orinasa
I Pamela Anderson sy Adil Rami dia hiara-misakafo amin'ny andro fety
Dress-kimono amin'ny tananao manokana
Ahoana ny fomba hanaovana anarana zazalahy york?
Vitaminan'ny synthetika - tombony sy fahasimbana
Ketraka ve i Courtney Kardashian?
MRI amin'ny loham-pianakaviana